Addressing Barriers to Learning Languages | CTLI
Foundation Phase Addressing Barriers to Learning Languages
22 July 2019 - 2 August 2019 (Applications close 08 July 2019)
THE MODE OF DELIVERY FOR THIS COURSE WILL BE ISIXHOSA.
THIS COURSE IS A FOLLOW UP ON CONTENT COURSE, ONLY TEACHERS WHO COMPLETED THE LANGUAGE CONTENT COURSE QUALIFY TO APPLY, WITH EXCEPTION OF LEARNING SUPPORT TEACHERS AND SPECIAL SCHOOLS TEACHERS.
Injongo yolu qeqesho kukwabelana ngolwazi malunga nemiqobo ethintela ukufunda eMzantsi Afrika. Le miqobo ingafumaneka ekuhlaleni.
Uqeqesho lwahlulwe lwazezi Modyuli zintlanu zilandelayo:
IModyuli yoku-1: Ulwazi ngezinto ezingumqobo ekufundeni Le modyuli yenza amagqabantshintshi ngemiqobo ethintela ukufunda nezinto ezinokwenziwa ukuxhasa ukufunda ngempumelelo. Le modyuli ikwaxhobisa ootitshala ngendlela zokufundisa nokuhlola abafundi abakumanqanaba awohlukeneyo.
IModyuli yesi-2: Ulwazi ngemiqobo ethintela ukucinga nokuqiqa Le modyuli inika ootitshala ithuba lokufunda iingxelo neenkcazelo zeengcali eziphanda ngokucinga nokuqiqa. Oku kuquka indlela ingqondo efumana ngayo ulwazi, indlela eluhlalutya nelwetyisa ngayo ulwazi kunye nemiqobo ethintela ukucinga nokuqiqa. Le modyuli inika iingcebiso ngeendlea ezinokusetyenziswa ekufundiseni abafundi ukucinga nokuqiqa ezikolweni nasekuxhaseni abafundi abafumana ubunzima bokucinga nokuqiqa.
IModyuli yesi-3: Ukoyisa imiqobo ethintela ukuphulaphula nokuthetha Inika ithuba lokuphicotha imiqobo ethintela ukuphuhla kwezakhono zokuPhulaphula nokuThetha. Le modyuli ixhobisa utitshala ngeendlela zokuxhasa abafundi abaneengxaki zokuPhulaphula nokuThetha.
IModyuli yesi-4: Ukoyisa imiqobo ethintela ukufunda (reading) kunye nezandi Le modyuli inika ithuba lokuphonononga imiqobo ethintela ukufunda (reading) ngempumelelo. Inika iingcebiso ngeendlela zokuxhasa abafundi abahlangana nemiqobo ekufundeni nasekunakaneni izandi (reading and phonics).
IModyuli yesi-5: Imiqobo ethintela ukubhala nokubhala ngesandla Yona le ikrobisa ootitshala kwimiqobo ethintela abafundi ekubhaleni ngesandla nasekubhaleni izimvo zabo ngokufanelekileyo. Le modyuli inika ootitshala ithuba lokwabelana ngeendlela zokufundisa nemisebenzi abanokuyenza ukuxhasa abafundi abaneengxaki zokubhala ngesandla kwakunye nobuchule bokubhala.
Sinqwenelela ootitshala impumelelo kolu qeqesho sithemba kananjalo ukuba baza kuziva bekulungele ukuxhasa nokufundisa abafundi abakumanqanaba awohlukeneyo ekufundeni ulwimi, ingakumbi ukufunda nokubhala. Sinethemba lokuba ootitshala abafumene olu qeqesho baza kuziva bekuxhobele ukukhawulelana neemfuno zabafundi.